Landa izindaba ezindala ze-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Januwari 24, 2019 0 Comentarios 2712
I-Instagram yinethiwekhi yokuxhumana nabantu eyenzelwe ukwaba izithombe namavidiyo; eshicilelwe ngokuqondile nangokuqondile. Ingabe iplatifomu entsha okuvumela ozuzayo ukuthi bandise ukuxhumana kwabo kuzo zonke izingxenye zomhlaba ukuze ngezithombe namavidiyo, phakathi kwabanye, kusetshenziswa amathuluzi atholakale ngaphakathi Isitolo Play (I-Android) noma i-IOS (i-Iphone) nakwikhompyutha noma ekhompyutheni, lapho ungalanda khona izindaba zakudala ze-Instagram nokuqukethwe okuthandekayo ngaphakathi Isicelo esifanayo.
Njengoba wazi, i-Instagram ingenye ukuxhumana nomphakathi nabalandeli abaningi emhlabeni wonke, kubhekwa njengomholi emkhakheni, okwamanje kubekwe ngenkomba ephezulu yabasebenzisi ngenxa yezinhlobo zokuqukethwe ezikunikezayo; lokhu kushicilelwa ngezinhloso zomuntu siqu neze-advertising, kanye neze- ibhizinisi nezinkampani. Ngaphandle kwalawa mafayela, unga share ngokusebenzisa amanye amanethiwekhi omphakathi, ukuze uhlangabezane nalesi sidingo maphakathi nendawo. Lokhu kusiza ukusebenzisana kakhulu, sibonga ukuhambisana kohlelo lokusebenza namanye amapulatifomu.
Okuqukethwe kutholakala ku-Instagram
Kunokwehlukahluka kokuqukethwe okutholakala kuzo zonke izinhlobo zezithameli, ukuze wabelane ngezikhathi ezikhethekile, zenze imikhankaso yokukhangisa, imilayezo yemfundo noma uthole abalandeli, okuvezwa ngokusebenzisa videos, izithombe, izindaba kanye nokusakazwa bukhoma nokuqondile, okwaziwa ngokuthi ukusakaza, lapho ababambiqhaza bengabuza noma yimuphi umbuzo ngokwakha ukuxhumana phakathi kwabalandeli kuhlelo lokusebenza.
Ungalanda kanjani izindaba ezindala kusuka ku-Instagram?
Kulula kakhulu, lokhu okuqukethwe kungaba ukulanda ngamathuluzi, atholakala ku-Google Play Isitolo se-Android, noma i-IOS ye-Iphone, lapho abanye bezocela imvume khona finyelela kusuka ku-akhawunti yomsebenzisi ekuxhumaneni nomphakathi, nakukhompyutha noma kwikhompyutha ngenjini yokusesha ye-Chrome ngokusebenzisa izandiso ezivumayo ukulingisa esipheqululini se-Instagram kube sengathi yifoni ephathekayo.
Amathuluzi atholakalayo ukucatshangelwa
Ukulanda ividiyo kwe-Instagram
Kuyithuluzi elikuvumela ukuthi ulande izithombe namavidiyo ukuze uphinde ulishicilele kabusha ngaphakathi instagram, isebenza ku-Android ne-IOS. Izinyathelo ezilandelayo kumele zilandelwe:
Cindezela amamaki oku- izithombe namavidiyo wezindaba kanye umugqa wesikhathi.
Kopisha isixhumanisi, vula i-Video Downloader yethuluzi le-Instagram bese ukopisha ukufaka okuqukethwe.
Ngemuva kwalokho kuzovela ividiyo noma isithombe; futhi kungabiwa noma ukulandwa ngenketho ongayigcina kuselula.
Landa amavidiyo e-Instagram
Kusetshenziswa i-Android, gcina futhi wabelane ngezithombe kalula, ngesisodwa nje ukuchofoza, futhi ivumela ikhophi ama-hashtag nemibhalo yokusebenzisa Ngaphandle kobunzima, longa amavidiyo, izindaba nezithombe kwisitoreji sangaphakathi seselula esivumela ukwabiwa noxhumana nabo obathandayo, ulandela izinyathelo ezingezansi:
Ngena ngemvume ku-Instagram
Khetha landa amavidiyo e-Instagram.
Gcina okuqukethwe kuselula.
Indaba Saver ye-Instagram
Kuyinto isicelo esikuvumela ukuthi ulande izindaba ezindala ze-Instagram, ikakhulukazi uma kumayelana namavidiyo nezithombe, imfuneko ebalulekile ye- finyelela okuqukethwe ukuba ne-akhawunti kuhlelo lokusebenza lwe-Instagram, ngezinyathelo ezilandelayo:
Finyelela i-Instagram bese useshe le ndaba noma okuqukethwe.
Cindezela kuze kuvele imenyu.
Khetha inketho yokulanda kanye ikheli lokuya (isitoreji sangaphakathi).
Ngokuvamile ukungena ngqo kwiwebhusayithi, kuvimbela ukulayisha izithombe namavidiyo okuphoqelekile ukusebenzisa uhlelo lokusebenza kwiselula. Ngalesi sandiso ungangena ku-Instagram ngendlela efanayo njengoba isetshenziswa kuselula, izinsiza zekhompyutha ezifana namavidiyo nezithombe ezitholakalayo ukwabiwa; futhi ukwazi ukufinyelela kokuqukethwe kwabalandeli. Kuyasebenza amakhompyutha noma amakhompyutha. Ifakwe kanjena:
Faka isitolo sewebhu kusuka kusiphequluli seGoogle Chrome.
Faka igama lesandiso kunjini yokusesha evela ngakwesobunxele kwesikrini bese ucindezela faka
The isandiso sewebhu ye-Instagram
Khetha ukwengeza kokunwebeka futhi kuzofakwa ngokuzenzakalelayo kusiphequluli.
Izinzuzo zamathuluzi wokulanda izindaba ezindala ze-Instagram
Ziyizicelo ezinhle zalabo abasebenzisi abathanda ukugcina amavidiyo nezithombe, ngenketho yokulanda izindaba ezindala ze-Instagram.
Zilandwa ngokushesha, zivumela ukufinyelela kwesicelo
Amafayela alandiwe agcinwa kudivayisi ephathekayo nekhompyutha.
Abathathi isikhala esiningi kudivayisi yeselula
Isipele sezindaba ze-Instagram
Lesi siphakamiso senziwe ngesicelo sabasebenzisi bohlelo lokusebenza, ukuze khumbula izindaba ezabiwe, lapho kuvela khona isithombe noma ama-anecdotes wevidiyo angabonakala kwabanye abalandeli; futhi zingashicilelwa futhi ukukhumbula lezo zikhathi, ngenxa yalezi zandiso namathuluzi enziwe avumela ukulanda izindaba ezindala ze-Instagram, ngaphezu kokuqukethwe kwesicelo kusuka kuphrofayela yomuntu siqu, kuya kwabanye abalandeli khiqiza ukwaneliseka okwengeziwe phakathi kwabasebenzisi, okwandisa isidingo sokusebenzisa amandla ukuwenza uthandeke.
1 Okuqukethwe kutholakala ku-Instagram
2 Ungalanda kanjani izindaba ezindala kusuka ku-Instagram?
3 Amathuluzi atholakalayo ukucatshangelwa
3.1 Ukulanda ividiyo kwe-Instagram
3.2 Landa amavidiyo e-Instagram
3.3 Indaba Saver ye-Instagram
3.4 Iwebhusayithi ye-Instagram
4 Izinzuzo zamathuluzi wokulanda izindaba ezindala ze-Instagram
5 Isipele sezindaba ze-Instagram
Januwari 24, 2019
Umsebenzi wombhali uvela kanjani ekhaya?
Januwari 25, 2019
Kuyini Ukumaketha Kwezenhlalo?